आत्मा सबैको एकै हो, परिचय सबैको खोल हो - Pahilo Online
आत्मालाई सबैले चिनौं र समान व्यवहार गरौं । उच्च र निचको भावना त्यागेर अगाडि बढे सुन्दर समाज बन्ने पक्का छ । विश्व सृष्टिको क्रममा कसैलाई सानो र कसैलाई ठूलो बनाएको होइन । विना अपराध केवल जन्मको आधारमा व्यक्तिलाई मात्र होइन सिङ्गो जातिलाई नै अपमानित ढंगबाट सानो र ठूलो बनाउने यो गलत सामाजिक संरचनाको अन्त्य नगरी यो देशको विकास असम्भव छ । यहि कुराको मध्यनजर गरी २०६३ जेठ २१ ग्ते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो ।
सम्झौं त, मन्दिरको मूर्ति बनाउने मान्छे त्यही मूर्ति मन्दिररुपी घरमा प्रवेश गरेपछि छुन नहुने । के यो वैज्ञानिक सत्य हो ? जो अछुत पारिएका समूह सबै कलाकार, आविष्कारक छन् । यी कलाकारको उचित सम्मान गरी देश निर्माण कार्यमा संलग्न गरे देशको चौतर्फी विकास हुने छ ।
हाम्रो देश सुन्दर शान्त प्रकृति हेर्दा विचित्रको छ । यही देशमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ । यही सगरमाथाको देश सुन्दर भनी विश्वमा चिनिएको छ । देशमा भएका सबै नागरिकको भावना पनि यहि सगरमाथा जस्तो उच्च विचार भएको भए, देशको नेपाली भाषा, विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बन्ने थियो । यहां त अलि सिप भएका मेहनती कलाकारलाई पानी नचल्ने सानो बनाइएको छ । कसरी विकास होस्, सतीले सरापेको देश भन्छन् सांच्चै हो की जस्तो लाग्छ ।
कलिलै उमेरमा उमेर ढल्केका संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिदिने र श्रीमान्को मृत्युसंगै मर्नुपर्ने, यो कस्तो अपराधि मानसिकता ? विचरा ती जिउंदै जल्ने महिलालाई कस्तो पिडा भयो होला ? एक पटक विचार गरौं त ! तिनी जस्तै पिडामा परेका मानिसले दिएको श्रापको कारण पनि यो देशमा अशान्ति र किचलो भएको होला । अनि विवेकशिल मानवले सोच्ने कुरा हो । त्यही सोचेर चन्द्र शमशेरले सती प्रथा अन्त्य गरेका होलान् । विना तथ्य विना प्रमाण अविवेकीले चलाएको कुप्रथा च्यापेर देशको चौतर्फी विकास हुन सकेन ।
काम गर्ने कलाकार, असल व्यक्तिले अन्तरनिहित प्रतिभा भएकालाई पाखा लगाएको परिणाम, देशको विकासमा बाधा आएको भनी अड्कल काट्न सकिन्छ । अशिक्षित, अविवेकी, कुप्रथाका काखी च्याप्ने भएका कारण राज्यको चौतर्फी विकास हुन सकेन, सामाजिक भुतले देशलाई तर्साइरहेको छ । अब सबै विवेकी बनी यो समाजमा भएका सामाजिक भुतलाई मानसपटलबाट हटाउनु पर्छ । विवेकशिल, वैज्ञानिक, तथ्यपरक कार्य गर्ने कलाकारको उच्च सम्मान गरी, काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, आन्तरिक मतभेद हटाउनु पर्छ । देशको विकास हुन्छ । सती प्रथा हटाउंदा देशको यो अवस्थासम्मको विकास भएको हो । अब २०६३ जेठ २१ को निर्णय बकाइदासाथ चेतनामुलक रुपमा कार्यान्वयन भए देशको विकास प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बन्नेछ । कारण नेपालमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देशमा छ । सर्वोच्च शिखर हेर्न आएको मानिस नेपाली भाषा सिक्न लालयित हुनेछन् । देशको विकास गर्न सबै नेपाली एकमना, एकताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
उस्तै र एउटै गोत्रका मानिसबीच भएको विभेदका कारण भएको अमिलो मन, अबका दिनमा नहोस्, राष्ट्रको चौतर्फी विकास होस्, सबै नेपाली एक हौं भन्ने भावनाको विकास होस् ।
मैले २०३८ सालदेखि अनवरत रुपमा एउटै पार्टीको आस्था बोकी हालसम्म यही सामाजिक सद्भावको आशामा लागिरहेको छु । २०४२ जेठ २ गतेदेखि यस पथरी शनिश्चरेको तत्कालिन भागिरथ नि.मा.वि. मा नियुक्ती पाई कामगर्दै गर्दा मेरा सहकर्मी सबैमा सामाजिक सद्भाव नै प्राप्त गर्दै मा.वि., उच्च मा.वि. बनाउनको लागि ईंटा थप्ने काम गर्दै विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्दै आएको छु ।
आफुले रोपेको विरुवाको माया धेरै लाग्छ । त्यसबेलाका धेरै विद्यार्थीहरु राम्रो प्रगति गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्र आगटेका घनेन्द्र ओझा जस्ता धेरै विद्यार्थीहरु समता मुलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले कलम चलाईरहेका छन् । यसरी समाजको विकृतिको अन्त्यका लागि सधैं लागिरहन हार्दिक शुभकामना । कोही विद्यार्थी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कोही शिक्षाको क्षेत्रमा छन् । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् । सधैं सबैको अग्रस्थान हासिल होस् हार्दिक शुभकामना ।
अहिले विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ ले सबैलाई आक्रान्त पारेको छ । महामारी फैलिएको छ । यो कोभिड–१९ ले न त जात, न त धर्म केही हेर्दैन । उसले जसलाई भेट्छ उसैमा संक्रमित हुन्छ । हामी एक आपसमा जोगिएर, भौतिक दुरी कायम गरेर बस्नुपर्छ । यसलाई निष्कृय पार्न चेन ब्रेक गर्नुपर्छ । सांच्चै बार्नुपर्ने यही रोग नलागोस भनेर मात्र हो, तर अन्धविश्वासमा हामी दगुर्नु हुंदैन । वैज्ञानिक तथ्य कुरा मान्नुपर्छ । अविवेकी निर्णय कहिल्यै गर्नु हुंदैन । सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको भावना अगाडि सार्नुपर्छ । हामी सबै जोगिएर बसौं यो कोभिड देखि डराउनु पर्छ । एक अर्कामा दुरी कायम गरेर बस्नु पर्छ । स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्छ । सुख पनि अस्थायी हो, दुःख पनि अस्थायी हो । हामीलाई यो कोभिडले दुःख दिइरहेको छ । यो पक्का पनि अस्थायी हो, चांडै निर्मुल भएर जाने छ । एक आपसमा भएका मतभेदको समुल नष्ट गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोचको विकास सबैले गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा कोही पनि लाग्नु हुंदैन । (लेखक पथरीशनिश्चरे नगर कार्यपालिका सदस्य हुन् । सं. )
पथरीशनिश्चरे–४ मोरङ (९८४२०७७८१०)
बिहीबार, १४ श्रावण २०७८, १३:४५ July 30, 2021 मा प्रकाशित
1 thought on “आत्मा सबैको एकै हो, परिचय सबैको खोल हो”
साह्रे सुन्दर बिचार। सवै नेपाली जनमा यस्तै बिचारले बास गराेस। मानिसलार्इ पशु भन्दा तल्लाे दर्जामा राख्ने बिचारहरूलार्इ यहि महामारीले मेसाे मिलाएर संगै लगि हालाेस ।